I-Caravan & Camping Yehlathi Lasehlathini - IntoKildare
Isetshenziswa nguMary noMichael McManus, iForest Farm inikeza izindawo eziningi zokuhlala. IKharavani neCamping Park enezinsizakalo ngokugcwele itholakala kuleli pulazi lomndeni elihle.
Kutholakala ku-5km ukusuka edolobhaneni lamagugu i-Athy, iForest Farm iyisisekelo esihle sokuvakasha sokuhlola i-County Kildare. Izinsizakusebenza zifaka imvula eshisayo yokuthokozisa, ama-hardstand, amathoyilethi, ifriji lefriji, ikhishi lenkambu kanye nogesi ka-13A. Ipulazi elisebenzayo linezihlahla ezinhle kakhulu zeBeech ne-Evergreen.
Ukuziphekela, Amatende eKildare, isabelomali, I-Pet Friendly, Umndeni Friendly, 3 Star, Umjaho
Umgwaqo waseDublin, Umjaho, Isifunda iKildare, Ireland.